Obbo Hayile-maariyaam Dessaaleny
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa, Obbo Hayile-maariyaam Dessaalenyi, godinaalee Harargee Lixaa, Harargee Bahaa fi naannoolee ka biroo keessatti walitti-bu’insawwan uumamaniin lubbuu namaa dhabameef, gadda isaanii ibsanii jiran. Mootummaan haalawwan uumaman akka qoratuu fi ba’ii isaa akka beeksisu illee dubbatanii jiran.
Eskindir Firew, Finfinnee irraa akka gabaasetti, aanaalee naannoo Oromiyaa fi Somaalee jiran keessatti walitti-bu’insi uumame eega dhiheenya kanaa as hammaachuu isaa illee dubbatan, Muummichi-ministaraa Hayile-maariyaam.
Godinaa Harargee Lixaa, aanaa Daaroo Labuu, araddaa Gaadulloo keessatti, kanneen nageenya isaaniif jecha Buufata Poolisii naannoo sana jiru keessa akka buufatan taasisamanii turan – dhalattoota Somaalee lammiwwan Itiyoophiyaa irratti ajjeechaan jumlee irratti raaw’atamee jira. Mootummaan gochaa sana balaaleffataa, garee dhimma kana qoratu ka dhaabe ta’uu ibsuun fedha. Eega dhimmi sun qoratamee qulqulleeffamee booda, trakaanfiin barbaachisaan kan fudhatamu yoo tahu, ba’iin qorannaa sanaa tartiibaan kan uummataaf ibsamu tahuu ibsuun fedha. Haala wal-fakkaataadhaan Calanqoo fi naannoolee ollaa gandeen kanaatti walitti-bu’insawwan uumaman irraa kan ka’e, dhalattoota Oromoo naannawa sana jiraatan balaa du’aa fi madaa’uu dhaqqabee jira. Maqaa koo tii fi mootummaa federaalaatiin, balaa lammiwwan nagaa irra gahe kanaaf gadda cimaa natti dhaga’amee ibsaa, maatiilee miidhamtootaa, firoota isaanii fi guutummaa lammiwwan Itiyoophiyaatiif jajjabinan hawwa, jedhanii jiran. Sabaa-himaaleen gabaasaalee “itti-gaafatamni itti hanqate” ittiin jedhan dhiheessuu irraa akka of qusatanis hubachiisanii jiran.
Muummichi-ministaraa Itiyyophiyaa ibsa kana kennuun, koreen hoji-raaw’achiistuu EHADEG, dhimmoota yeroo ammaa irratti dubbata jira – odeeffannooleen jedhan ennaa dhaga’amaa jirutti tahuu gabaase – Eskindir. Ittii-ba’insi walga’ichaa garuu haga ammaatti hin beekamne. Gabaasaa guutuu dhaggeeffadhaa.
Hermaan Koheen: Hoogganoonni TPLF Seeraa fi Sirni Itoophiyaa Keessaa Otuu Guutummaatti Hin Dhabamin Akka Yunaaytid Isteets Marii Huda Hirmaachise Qopheesitu Gaafachuu Qaban